မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်မှ ၄င်း၏စစ်တပ်အား နျုကလိယားလက်နက်အား အဆင်သင့်ပြင်ခိုင်း (ရုပ်သံ) – International War News Journal
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်မှ ၄င်း၏စစ်တပ်အား နျုကလိယားလက်နက်အား အဆင်သင့်ပြင်ခိုင်း (ရုပ်သံ)
Posted on March 4, 2016 March 4, 2016 by MMAGTECH
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအမ်းမှ ရန်သူနိုင်ငံများ၏ စစ်အင်အား၊ အန္တရာယ်များ ကြီးထွားလာသောကြောင့် မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်အား ၄င်းတို့ ၏ နျုကလိယားလက်နက်ကို အချိန်မရွေးအသုံးပြုနိုင်ရန် အဆင်သင့်ပြင်ခိုင်းခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာ KCNA မှ ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောကြားချက်အရ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ပြီးခဲ့သည့် ကြာသာပဒေးနေ့ တွင် United Nations မှ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ မှုများအား တုန့် ပြန်သည့်အနေဖြင့် ပင်လယ်ပြင်သို့ တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်များ မိုင် ၉၀ ခန့် အတွင်းတွင် ပစ်လွှတ်ဖောက်ခွဲ ပြသခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့ အပြင် ကင်ဂျုံအမ်း၏ ပြောဆိုချက်အရ ၄င်း၏ ဒုံးကျည်အသစ်မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအထိ ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိမည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ၏ ခန့် မှန်းချက်အရ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ နျုးကလိယားထိပ်ဖူးတပ် လက်နက်အသစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံအထိ ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ အထက်ပါအကြောင်းအရာများကို Reuters သတင်းဌာနမှ ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ရုပ်သံဗီဒီယို ကြည့်ရှုရန် –
Video Reference #euronews
Reporting by #AJAX
Exclusively in Myanmar-Language on International War News Journal
← အီရတ်နိုင်ငံ နာမည်ကျော် အထူးတပ်ဖွဲ့ များမှ ISIS စစ်သွေးကြွများအား တိုက်ခိုက်ချေမှုန်း (ရုပ်သံ)
Thai Cave Boys Leave Hospital and Apologize for All the Fuss - New York Times July 18, 2018
New York TimesThai Cave Boys Leave Hospital and Apologize for All the FussNew York TimesBANGKOK — The Thai boys lit up as they recalled the pleasures of life that they had missed while trapped inaflooded cave, like fried rice, KFC and sushi. But they also wanted to say that they were very, very sorry. On Wednesday evening, the 12 ...Thai soccer team opens […]
Obama urges Africa to do more to stem brain drain - Reuters July 18, 2018
ReutersObama urges Africa to do more to stem brain drainReutersJOHANNESBURG (Reuters) - Former U.S. president Barack Obama advised talented young Africans on Wednesday to drive change at home rather than emigrating, and urged their governments to do more to curbabrain drain. Former US President Barack ...Graça Machel: What Nelson Mandela taught me -- and t […]
Trump's royal faux pas: What POTUS got wrong about his meeting with the queen - USA TODAY July 18, 2018
USA TODAYTrump's royal faux pas: What POTUS got wrong about his meeting with the queenUSA TODAYBritain's Queen Elizabeth II welcomed US President Donald Trump and First Lady Melania Trump to Windsor Castle on Friday. (July 13) AP. AFP AFP_17K94N I DIP GBR EN. Queen Elizabeth II stands with President Donald Trump and first lady Melania ...Trump fals […]